१० महिने शिशु सहित एकै परिवारका तीन जनाले भिरबाट हाम फालेर प्राण त्यगे यस्तो छ कारण – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/१० महिने शिशु सहित एकै परिवारका तीन जनाले भिरबाट हाम फालेर प्राण त्यगे यस्तो छ कारण
१० महिने शिशु सहित एकै परिवारका तीन जनाले भिरबाट हाम फालेर प्राण त्यगे यस्तो छ कारण
प्युठान । भिरबाट बाबुले पनि हा’ म ‘फा’लेर प्रा’ण त्या’गे दे,ह त्या,ग गर्नु कुनै चानचुने कुरा हैन । त्यो पनि नवजात शिशुको साथमा । दे,ह त्या,ग गरेकी एक जना आमाले आफ्नै १० महिने शिशुलाई पहिला रुखको हाँhगोमा झु, jण्ड्या, aएर त्यसै हाँhगोमा उनी आफु पनि झुj, ण्डिj, एको अवस्थामा गाउँलेहरुले फेला पारेका छन् ।
प्यूठानको लिगामा भएको यो घ,टनालाई गाउँलेहरुले दे,ह त्या,ग नभई ह’ ‘त्या भएको हुने सक्ने शं, का व्यक्त गरेका छन् । यो घ,टनामा मृ, त्यु भएकाको आफन्तहरुको भनाई अनुसार घ,टना हुने दिनमा सबै कुरा सामान्य नै भएको बताएका छन् । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
कुखुराको भाले ३० दिन देखि प्रहरी हि’रास’तमा ? यस्तो रहेछ कारण ?
सर्लाहीको इश्वरपुरमा चौथो दिन पनि निषेधाज्ञा जारी
दुखद खबर: रोमानियामा एक नेपाली युवाद्वारा पार्कमै आत्महत्या
महिलालाई क रणी गरेको आ रो प मा प्रधानाध्यापक धनपालथानबाट प क्रा उ